अाज ३ प्रदेशले सभामुख पाउने, को बन्दै छन् प्रदेश १, ६ र ७ मा सभामुख ? – Halkaro
अाज ३ प्रदेशले सभामुख पाउने, को बन्दै छन् प्रदेश १, ६ र ७ मा सभामुख ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २९ माघ सोमबार
काठमाडौं । अाज सोमबार चार वटा प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभा बैठक बस्दै छ । प्रदेश नम्बर १, २, ६ र ७ को दोस्रो प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो । अाजै बस्ने बैठकले प्रदेश १, ६ र ७ मा सभामुखको टुंगो लगाउने छ ।
सभामुखका लागि प्रदेश नम्बर १ मा एमालेका प्रदीपकुमार भण्डारी, ६ मा एमालेकै राजवहादुर शाही र ७ मा एमालेकै अर्जुनवहादुर थापाको मनोनयन परेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकले औपचारिक रुपमा भण्डारी, शाही र थापालाई सभामुख घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सभा २ को विहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकले भने कार्यविधि तयार पार्ने बताइएको छ । यहाँ फागुन २ गते सभामुखका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रदेश प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरमले मुख्यमन्त्री र राजपाले सभामुख लिने सहमति दुई दलबीच भइसकेको छ । सोही अनुसार राजपाले सभामुख पाउने छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ५ मा रुकुमका पूर्णबहादुर घर्तीमगरलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले घर्तीमगरलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो । ५ नम्बर मा पनि फागुन २ गते नै औपचारिक रुपमा सभामुख चयन गर्ने कार्यतालिका छ ।
यता ३ नम्बर प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख यसअघि नै चयन भइसकेको छ । ४ नम्बर प्रदेशमा भने फागुन ३ सभामुखको निर्वाचन हुने छ । यहाँ पनि बाम गठबन्धनको बहुमत मएको ले एमाले माअोवादी सहमति अनुसार माअोवादी केन्द्रले सभामुख पाउने छ । उसले नेत्र अधिकारीलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ ।
← अाज पनि गोप्य वार्तामा अोली-प्रचण्ड
महिला भलिबलको उपाधिका लागि न्यू डायमण्ड र एपीएफ भिड्ने →